Indlela Yokulungiselela Iimvavanyo zeeNgcaciso zeSikolo soBucala
Kubafundi nabazali Izikolo ezizimeleyo
Ngokungafani nezikolo zikarhulumente, kungekhona wonke umntu ofuna ukuya khona, unako. Enyanisweni, kukho inkqubo yokwenza isicelo, kwaye njengenxalenye yale nkqubo, izikolo ezininzi ezizimeleyo zifuna uhlobo oluthile lokuvavanya ukuba lwamkelwe, ngokukodwa kumabakala aphakathi naphakathi. Izikolo zemini ezizimeleyo zifuna i-ISEE, okanye i-Independent School Entrance Exam, ngelixa izikolo zasebhankini zihlala zifuna i-SSAT, okanye i-Test School Admissions Test.
Ezinye izikolo ziya kwamkela zombini, kwaye kunjalo, abanye, baneemvavanyo zabo. Umzekelo, izikolo zamaKatolika zifuna iimvavanyo ezahlukeneyo, ezifana ne-TACHs okanye i-COOP okanye i-HSPT.
Kodwa ezi vavanyo zokungena kufuneka zingakhathazeki okanye zibe ngumqobo wokufumana imfundo yesikolo yangasese. Khangela izicwangciso eziqhelekileyo zokulungiselela ukuhlolwa kovavanyo lwangasese esikolweni:
Fumana iNcwadi yokuThengisa iMvavanyo
Ukusebenzisa incwadana yesandulela sokuhlola kuyindlela efanelekileyo yokufumana oqhelekileyo ukuvavanya novavanyo ngokwalo. Ikunika ithuba lokujonga phezu kwesakhiwo sovavanyo kwaye ufumane ingqiqo yamacandelo afunekayo, okuqhelekileyo aquka ukufunda, ukuthetha ngomlomo (njengokuchonga igama elifanayo, okanye elifanayo, igama elinikeziweyo ), kunye nezibalo okanye ingcamango. Ezinye iimvavanyo nazo zifuna isampula yokubhala, kwaye incwadi yokuhlola yokuhlola iya kunika ezinye izinto ezifana noko ungakufumana xa uyithatha ngokwenene. Incwadi iya kukunceda ukuba ufumane umxholo wefomathi kunye nexesha elibiweyo ngalinye.
Nangona iindibano ezahlukeneyo zokuvavanya ukungena zibonelela ngeencwadi zokuphonononga kunye nokuqhuba iimvavanyo ezingathengwa. Usenokukwazi ukufumana iimvavanyo zenkqubo ye-intanethi kunye nemibuzo yesampula mahhala.
Thatha uvavanyo lwexesha eliqhelekileyo
Ziqhelise ukuthatha uvavanyo phantsi kweemeko ezihambelanayo, ngokuzinika ixesha elide kuphela njengoko uvavanyo luvumela.
Qiniseka ukuba uqaphele indlela ohamba ngayo kwicandelo ngalinye kwaye uqaphele ukuba uthatha ixesha elininzi, okanye ukuba ukhawuleza. Esikhundleni sokubopha kumbuzo owodwa, phawula nayiphi na umbuzo ongaqinisekanga ngayo kwaye ubuyele kuyo xa uqedile enye imibuzo. Lo mkhuba unokukunceda ukuba usebenzise ummandla apho uvavanyo luya kunikwa khona kwaye lukulungiselele ukulawula kakuhle ixesha lakho kunye nezicwangciso zokuthatha uvavanyo . Ukuba uqhuba iseshoni yovavanyo lonke, intsingiselo, uyalingisa isipiliyoni esipheleleyo sokuvavanya, kunye nekhefu, kukukunceda ulungelelanise ukuchitha ixesha elininzi uhleli kwaye usebenza kwindawo enye. Ukuntuleka kokukwazi ukuvuka nokujikeleza kungabakho utshintsho kubafundi abaninzi, kwaye abanye bafuna ukuhlala behlala behlala bezolile.
Ukukhuthaza iiNdawo zakho eziNzileyo
Ukuba ufumanisa ukuba uhlala ufumana iindidi zeemvavanyo zovavanyo ezingalunganga, buyela emva kwaye ulungise ezo ndawo. Umzekelo, unokwenza usebenze kwindawo enye yemathematika, njengamaqhezu okanye amaphesenti, okanye ungadinga ukusebenzela ekuphuculeni nasekukhuliseni isigama sakho ngokuwenza amakhadi amancinci ngamagama aqhelekileyo asetyenziswe ngawo kwezi mvavanyo, ezifumaneka kwiincwadi zokuphonononga.
Hamba umThunywa ukuba kuyimfuneko
Ukuba awukwazi ukuphakamisa amanqaku akho ngokwakho, cinga ukuqesha umqeqeshi okanye uthathe uqeqesho lwe-prep test. Qiniseka ukuba umqeqeshi unamava okulungiselela abafundi ukuvavanya othabathayo kwaye wenze yonke imisebenzi yasekhaya kwaye usebenzise iimvavanyo eziyinxalenye yekhosi ukuze uphumelele kuyo. Amathuba kukuba, ulahlekelwa zicwangciso eziphambili kunokuba ufune ukufunda ngaphezulu, ngoko umqeqeshi onobuchule ekuvavanyeni ngokwabo kubaluleke ngaphezu komqeqeshi onolwazi lwesiNgesi okanye izibalo.
Funda Izikhokelo ngokunyameko
Oku kubonakala kubonakala kodwa ngokuqhelekileyo isicwangciso esibalulekileyo sokuphumeza uvavanyo. Abafundi bahlala befunda imibuzo ngokungalunganga okanye bayigqithise ngokupheleleyo, oko kuthetha ukuba nangona bayayazi iimpendulo zemibuzo, bazifumana zingalunganga. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba uhlawule kwaye ufunde izikhokelo ngokuchanekileyo uze ucwangcise amagama angama-KEY "njenge-EXCEPT" okanye "KUPHELA" ukuqinisekisa ukuba uphendula ngokuqinisekileyo umbuzo ngamnye umbuzo.
Ngamanye amaxesha, kukho iziphakamiso ezilungileyo kumbuzo ngokwawo!
Lungele Usuku lovavanyo
Yazi into oyifunayo kwimihla yokuvavanya, kubandakanywa izixhobo zokusebenza zokubhala kunye nokubhala. Kwaye, ungakulibali ukutya kwasekuseni; awufuni ukuphazamiseka kwengxube (okanye abantu abajikelezile) ngexesha lovavanyo. Yiba nezikhokelo kwindawo yakho yokuvavanya ekulungele, kwaye ufike kusasa ukuze usebenzise indlu yokugcina kwaye uhlalise kwisihlalo sakho. Qinisekisa ukuba ugqoke kwiindawo, njengoko amaqondo okushisa kumagumbi okuvavanya ayahluka; Kunceda ukuba ungeze i sweatshi okanye ingubo xa ubanda okanye ususe i sweatshi okanye ingubo xa igumbi lifudumele. Izicathulo ezifanelekileyo zinokukunceda, njengezwane ezibandayo xa ugqoke i-flip flops kunokuphazamiseka ukuba igumbi lipholile.
Xa ulapho kwaye uhleli kwisihlalo sakho, qiniseka ukuba uzifundele kwigumbi. Yazi apho iingcango zikhoyo, fumana iwashi ekamelweni, kwaye ukhululeke. Xa uvavanyo luqala, qiniseka ukuphulaphula ngenyameko izikhokelo ezifundwa ngu-proctor wokuvavanya, kwaye ugcwalise iphepha lokuvavanya ngokufanelekileyo, njengoko kulandelwe. Musa ukweqa phambili! Lindela izikhombisi-ndlela, njengoko ukungathobeli imiyalelo enikezelwayo kunokubangela ukungakufaneleki ukuvavanywa. Ngexesha ngalinye lokuvavanywa kwecandelo, hlawula ingqalelo ixesha, kwaye qi Yizisa ukutya kunye namanzi ukuze uhlaziywe ngokwakho ngexesha lokuphumula.
Landela ezi zikhokelo, kwaye unesiqiniseko sokuba namava okuvavanya. Ukuba awukwazi ukuhlala uvavanya ngaphezu kweyodwa.
Yiya kwi-intanethi kwisayithi yombutho wokuvavanya ukuze ubone ukuba kaninzi ungathabatha njani uvavanyo, kwaye ukuba kukho nayiphi na imingcipheko okufuneka uyiqaphele phambi kokuba ubhalise usuku lwesibini okanye lwesithathu lokuvavanya. Umnqweno omhle
Ngaba ii-Cell Phones ezivunyelwe ezikolweni?
Uluhlu lwabaSebenzi beZikolo ezizimeleyo: Yintoni enokuyenza?
Inkampu yasehlobo: Amathuba amahle kwiZikolo ezizimeleyo ezizimeleyo
Iindlela ezi-7 zeZikolo ezizimeleyo Zikulungiselela kwiKholeji
Iingcebiso ezi-4 kubazali nootitshala ukukhusela ukuxhatshazwa
Ukuthelekisa iMfundo kaRhulumente kunye neMfundo yabucala
Ziziphi iiMdaka eziPhezulu zeMidlalo eziPhambili kunye neeMidlalo?
IYunivesithi yaseSan Diego GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
NgoMatshi iMatriki Statistics
Zama Ezi ziTsha zeenqwelomoya zeGalfu kwi-Size
Ukufunda i-Quiz ethi "Ukulinda" nguGeorge Orwell
Indlela yokudibanisa "I-Concentrer" (ukugxininisa)
Indlela yokufumana iConven
Ubume bemizekelo yePerentienti kwiStatisti
Inkqubo yeSQLite kwiC Tutorial Two
Indlela Yokukhusela Ukuhlaselwa Ngenkomo Xa Uhambo
Iifayile zokusebenzela kunye neempapasho
Imfazwe yaseVietnam: I-Operation Linebacker
Ukuphulukiswa kweMpawu zoLwazi lweMandla Ingxaki - Fumana ukushisa kokugqibela
Impembelelo kaRichard Nixon kwimicimbi yaseMelika yaseMelika
I-Prezygotic ne-Postzygotic Isolations